Wednesday October 17, 2018 - 11:57:12 in Wararka by Liibaan Jeexoow
waa qaar kamid ah saraakiishii sacuudiyaanka ah ee dilay Wajiye Jamaal
Booliska dowladda Turkiga ee baaritaanka ku haya kiiska wariyaha ayaa sheegay in ay baaritaanno ku sameeyeen dhismaha qunsuliyadda sacuudiga iyo guri uu magaalada Istanbuul ka deganaa qunsulka guud ee dowladda Sacuudiga uqaabilsan wadanka Turkiga.
Warar soo baxay ayaa sheegaya in 15 sarkaal oo ku dhow Max'med Bin Salmaan ay dileen wariye Jamal Khashoggi kadibna ay Meydkiisa jarjareen, saraakiisha baaritaannada wada ayaa macluumaadyo ay u xaluuliyeen warbaahinta reergalbeedka waxay muujinayaan in howlgalka lagu dilay Jamal Khashoggi ay soo agaasimeen madaxda ugu sarraysa dowladda Aala Sacuud.
Wargeyska New York Times ayaa sheegaya in ragga falka dilka ah u geystay wariyaha ay awaamir toos ah ka heysteen dhaxal sugaha sacuudiga,
"Markii ay dilayeen waxay dhageysanayeen Music, Meydka Khashoggi waxaa kala jaray madaxa caafimaadka Amniga Sacuudiga Ninka lagu magacaabo Salaax aldabiiqi oo aad ugu dhow dhaxal suge Bin Salmaan" ayaa lagu yiri qoraal uu daabacay New York Times.
Caddeymo kooban oo laga helay saraakiisha ammaanka Turkiga ee ku howllan baaritaannada socda ayaa sheegaya in ay hayaan codka wariyaha ladilay oo qeylinaya iyo saraakiisha Sacuudiyaanka ah oo si xun ugaraacaya.
Mike Pompeo oo ah wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ayaa booqday magaalada Riyadh halkaas oo uu kulamo kulasoo qaatay madaxda Sacuudiga wuxuuna sheegay in hoggaanka dowladda Sacuudiga ay ballan qaadeen in ay gacan ka geysanayaan baaritaannada socda ayna ciqaabi doonaan kuwii dilay wariyaha.
Kiiska wariyahan lagu la'yahay magaalada istanbul ee dalka Turkiga tan iyo 2-dhii Bishan October ayaa cadaadis dhanka diblumaasiyadda ah saaray dowladda Sacuudiga oo sanadadii lasoo dhaafay sameynaysay isbedello dhanka siyaasadda iyo dhaqanka ah oo ay ugusii dhowaanaysay reergalbeedka balse waxaa muuqata in waddamada reergalbeedka ay hadda cadaadinayaan.
Caalamka oo dhan ayaa wada sugaya natiijada kasoo bixi karta baaritaannada ay wadaan laamaha ammaanka dowladda Turkiga waxaana loo badinayaa in falkii lagu dilay saxafigan wax ku qori jiray waregyska Washingtonpost uu mas'uul ka ahaa Max'med Bin Salmaan.
Dhageyso:Barnaamijka Diiradda Jimcaha oo lagusoo qaatay Sida Al Shabaab ay uwajahdo Kooxaha Jawaasiista ah.